मंगलवार, भाद्र २१, २०७३
काठमाडौं : पूर्व अर्थमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा.रामशरण महतले तत्काल संविधान संशोधनको आवश्यक्ता नरहेको बताएका छन् । नेपालवाणी रेडियो नेटवर्कमा आज बिहान पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भएमा पहिला सबै राजनीतिक दलहरूसँग सहमति गर्नुपर्ने बताए । ‘संविधान सहमतिमा संशोधन गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘गृहकार्य गर्नुपर्छ । तर अहिलेसम्म सहमतिका लागि प्रयास भएको मैले पाएको छैन ।’
डा. महतको यो अभिव्यक्तिले मधेसी मोर्चाको मागलाई ठेस पुग्नेछ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले सरकार गठनका बेला मधेसी मोर्चासँग संविधान संशोधन गरेर माग पूरा गर्ने तीन बुँदे लिखित सहमति गरेका थिए ।
संविधानका नाममा कसैले पनि जनतालाई अलमल्याएर बस्न नहुने डा. महातले बताए । ‘संविधान आवश्यक्ता पर्दा संशोधन गर्नुपर्छ । तर अहिले नै संशोधन केका लागि ? संविधान संशोधनको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ ।’ डा. महतले भने ।
केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा पुरक बजेट ल्याउनु पर्ने आवश्यक्ता आफूले नदेखेको कांग्रेस नेता डा.महतको भनाइ छ । ‘पूरक बजेट ल्याउने अवस्था मैले देखेको छैन’, उनले भने, ‘ओली सरकारले ल्याएको बजेट ठीक छ । पूरक बजेट ल्याउने विषयमा छलफल भएको छैन । मलाई त्यस विषयमा थाहा छैन ।’
नेपाली कांग्रेस स्थानीय निकायको निर्वाचनको पक्षमा रहेको डा.महतले भने, ‘अहिलेकै स्थानीय निकायको संरचनाभित्र रहेर जाने हो भने निर्वाचन गर्न सकिन्छ । अन्यथा गाह्रो हुन्छ ।’ उनले स्थानीय निकायको पछि पुनर्संरचना गर्ने गरी चुनाव गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।